Myanmar to export hibiscus tea to the US | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar to export hibiscus tea to the US
Nara Green Tea will export hibiscus tea also called roselle herbal tea made from roselle bud to the United State.
“We will export roselle herbal tea ataprice of $2 per box to the dealer in the States. Roselle herbal tea from Myanmar is not like those from other countries. It is not very sour but tasty to drink. When giving the samples to foreign friends, they love it,” Ko Kyaw Thiha, Managing Director of Nara Green Tea, said.
The company will export its very first batch of roselle herbal tea to the retail shops in the US this month.
Roselle buds, spearmint, ginger, butterfly peas, lemongrass, pennywort, or mango leaf are often used to make herbal tea by drying or boiling. In Myanmar, local roselle variety or Mexican roselle variety is used to make and export roselle herbal tea.
Nara Green Tea has sent samples to the United States as well as product information for consumers to market its products and consumers liked them.
The company also sells its products in the domestic market at the price of K2,500 per box containing 25 packs.
မြန်မာနိုင်ငံမှပထမဦးဆုံးထွက်ရှိထုတ်လုပ်သည့် ချဉ်ပေါင်ဖူးလက်ဖက်ခြောက် (Roselle Herbal Tea)ကို အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချ မည်ဟု Nara Green Tea လက်ဖက်လုပ်ငန်းမှ သိရသည်။
“အမေရိကားမှာရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဆီကို မူရင်းစျေး တစ်ဘူးကို ၂ဒေါ်လာနဲ့ တင်ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကချဉ်ပေါင်ဖူးလက်ဖက်ခြောက်က တခြားနိုင်ငံကဟာတွေနဲ့မတူဘူး။ အချဉ်မစူးဘူး။ သောက်လို့ကောင်းတယ်။ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေကို နမူနာ တိုက်တဲ့ အခါ ကြိုက်ကြတယ်”ဟု Nara Green Tea လက်ဖက်လုပ်ငန်းManaging Director ကိုကျော်သီဟကပြောသည် ။
ချဉ်ပေါင်ဖူးလက်ဖက်ခြောက် (Roselle Herbal Tea) ကို အမေရိကန်နိုင်ငံရှိလက်လီ အရောင်း ဆိုင်များသို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လအတွင်း ပထမအသုတ်အနေဖြင့် စတင်တင်ပို့ မည်ဟု သိရပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အွန်လိုင်းစျေးကွက်မှ တဆင့် ရောင်းချမည်ဟု သိရသည်။
ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင် Harbel Tea အဖြစ် ချဉ်ပေါင်ဖူး၊ ပူစီနံ၊ ချင်း၊ အောင်မဲညို၊ စပါးလင်၊ မြင်းခွာရွက်၊ သရက်ရွက် အစရှိသည်တို့ကို အခြောက်ခံခြင်း,ပြုတ်ခြင်းဖြင့် အသုံးပြုလျက် ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာမျိုး ချဉ်ပေါင်ဖူးနှင့် မက္ကဆီကန်မျိုး နှစ်မျိုးကို အခြောက်ပြုလုပ်၍ Harbel Tea သောက်သုံးနိုင်သော ထုတ်ကုန် အဖြစ် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါမြန်မာ့လက်ဖက်ခြောက်အားတင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ နမူနာများ စမ်းသပ် ပေးပို့ခြင်း,စားသုံးသူများအတွက် အချက် အလက်များထောက်ပံ့ခြင်းတို့ဖြင့်စျေးကွက်စမ်းသပ်ထိုးဖောက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် စျေးကွက် အတွင်း လက်ခံသည့်အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံရှိ လက်လီအရောင်းဆိုင်များထံသို့ စတင်တင်ပို့ရန် စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Nara Green Tea လက်ဖက်လုပ်ငန်းမှ ထုတ် လုပ်သော ချဉ်ပေါင်ဖူးလက်ဖက်ခြောက် (Roselle Herbal Tea) သည် သွေးတိုး၊နှလုံးနှင့် ဆီးချို ဝေဒနာရှင်များအတွက် အထူးသင့် တော်ပြီး စိမ်သောက်အထုပ်ပေါင်း ၂၅ ထုပ်ပါ တစ်ဗူးလျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၂၅၀၀ ဖြင့် ဖြန့်ချိ နေကြောင်း သိရသည်။
A strain pattern marked by vertical bars indicateamultifactorial etiology. cialis price malaysia Fig the right atrium or atria in avnrt or reentrant atrial tachycardia.
Previous articleMIC Approves $1 million underwear plant project
Next article“The pandemic hasn’t stopped us”:alook back at 2020 with Yangon American International School